Archive du 20161119
Rocade Andohatapenaka Zara raha vita
Aorian�ny fahavitan�ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia vao tokony hisokatra ho an�ny rehetra ny Rocade eny Andohatapenaka, hoy ny CRBC (China Road and Bridge Corporation).
Fitsaram-bahoaka Kolikoly no fositra, hoy ny CNIDH
Ny fikolokoloana ny �tsy maty manota� izay omena vahana sy arovana amin�ny alalan�ny kolikoly, ny fitsabahan�ireo manampahefana ambony sivily sy miaramila,
� Iles �parses � Ho azo amin�ny 2020�
Maro ny fikambanana miady mafy amin�ny fitakiana ireo nosy eparsa, izay mbola eo am-pelatanan�ny Frantsay hatramin�izao na dia ny nivoaka tamin�ny fehin-kevitry ny Firenena Mikambana tamin�ny taona 1979 aza fa an�i Madagasikara ireo nosy ireo.
Frankofonia 2016 Karakarain�ny Frantsay fatratra ny zandary malagasy
Dia mibaribary ny maha zanatany Frantsay an�i Madagasikara, tamin�ny nikarakarany fatratra ny zandarimaria malagasy. Saika ireny firenena zanatany Frantsay ireny ihany koa moa no ahitana itony vondrona mpitandro ny filaminana itony.
Lalao Ravalomanana Tsy teny Andohatapenaka
Tsy mba anisan�ireo manampahefana hita teny Andohatapenaka nitokana ny lalam-baovao omaly ny ben�ny tan�nan�Antananarivo Lalao Ravalomanana.
Fiarahamonina Malagasy Tsy hitovy mihitsy ny lahy sy ny vavy
Amin�ny maha Malagasy antsika dia efa manana ny soatoavina antsika manokana isika, hoy Atoa Ratiharison Jean Navandahy filoha nasionalin�ny fikambanana Za�Gasy Mandroso, raha tafaresaka tamin�ny gazety Tia Tanindrazana izy omaly teny Ambanidia.
Kaomisera eoropeanina Neven Mimica Ho avy eto hamonjy ny Frank�f�nia 2016
Andro sisa isaina dia raikitra ny fihaonana an-tampony faha-16 an�ny Frank�f�nia. Tsy ho raharahan�ireo firenena mampiasa amin�ny ampahany na manontolo ny teny frantsay ihany anefa io fa eo ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena sy mpiara-miombona antoka samihafa.
Dahalo roa maty, ka ny iray matin�ny fokonolona ny faharoa voatifitry ny zandary ary iray fahatelo azo sambobelona rehefa nanafika toeram-pivarotana iray an�ny Ben�ny tan�na Marofangady, Distrika Arivonimamo ny alakamisy teo.
CONSUL DE MONACO Nanolotra kits sportif ho an�ny mpianatra eto an-drenivohitra
Fomba iray hahafahana manampy ny ankizy sy ny tanora hivelatra ny fanaovany fanatanjahantena.
Lyc�e Moderne Ampefiloha Nohatsaraina ny toerana fanaovan�ny mpianatra fikarohana
Nohatsaraina ny foibe mitahiry ny antontan-kevitra eo anivon�ny Lyc�e Moderne Ampefiloha hahafahan�ireo mpianatra miisa 2.000 manovo fahalalana ao an-toerana manamora ny fanaovana fikarohana.
Fiatrehana ny maitso ahitra any Androy Am-perinasa ny ministeran�ny mponina
Nanampy ireo mponina any amin�ny Faritra Androy tamin�ny alalan�ny fanomezana ny masomboly �antaka� hahafahan�izy ireo miatrika ny maitso ahitra ny minisiteran�ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy
Fanarenana ny fakiolten�Ambatonakanga 24 273 700 ariary no ilaina
Notanterahana ny alarobia lasa teo ny fanolorana ny asa fanarenana ny Seminera Amparibe izay anisan�ireo toeram-ponenan�ny mpianatra ho Mpitandrina mandranto fiofanana teolojia amin�ny Oniversite Ravelojaona Ambatonakanga miaraka amin�Ambatobevanja sy Ambavahadimitafo.
Rahoviana vao ho tomponandraikitra ?
Raha mbola ho fifanilihana foana no iainana eto dia aza manantena ny ahita vokatra amin�izay atao. Toy ny lalao ara-panatanjahantena io